वित्त कम्पनीको नाफा २४% घट्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी वित्त कम्पनीको नाफा २४% घट्यो
वित्त कम्पनीको नाफा २४% घट्यो
गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १८ वित्त कम्पनीको वित्तीय विवरणले थोरै कम्पनीको मात्र नाफा बढेको देखाएको छ । वित्तीय विवरणमा अधिकांश कम्पनीको नाफा घटेको देखिन्छ । कम्पनीहरूको नाफा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कुल २४ दशमलव ५३ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवमा यी कम्पनीले रू. १ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन गरेका थिए भने गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ३ करोड मात्र नाफा कमाएका छन् । रिलायन्स फाइनान्सले भने चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रकाशित विवरणमा १० कम्पनीको नाफा घटेको छ भने आठ कम्पनीको नाफा बढेको छ । कम्पनीहरूको ब्याज खर्च र कर्मचारी खर्चहरू बढ्दा नाफा घट्न पुगेको विवरणमा देखिन्छ । सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि गर्नेमा बेष्ट फाइनान्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको अघिल्लो आवमा नाफा रू. ५२ लाख ६१ हजार ऋणात्मक थियो भने गत आवको असार मसान्तमा रू. ४ करोड ४२ लाख धनात्मक भएको छ । कम्पनीको ब्याज आम्दानी, अघिल्लो आवमा ऋणात्मक रहेको सञ्चालन मुनाफा गत आवमा धनात्मक हुनाले नाफा बढ्न पुगेको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १४ दशमलव ८७ रहेको छ ।
त्यसैगरी हाथवे फाइनान्स कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २ सय ८६ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ६७ लाख रहेको नाफा गत आवको असार मसान्तमा रू. ५ करोड ६६ लाख पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १४ दशमलव १७ रहेको छ । बोल्ड मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको नाफा १ सय ४२ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको अघिल्लो आवमा रू. १ करोड ७१ लाख रहेको नाफा गत आवको असार मसान्तमा रू. ४ करोड १५ लाख पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २२ दशमलव ८४ रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३३ दशमलव १९ रहेको जानकी फाइनान्सको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत बढेको छ ।
चौथो त्रैमासमा प्रोगे्रशिभ फाइनान्सको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ७४ दशमलव ७३ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवमा रू. १ करोड ४० लाख आर्जन गरेको नाफा गत आवको असार मसान्तसम्ममा रू. ३५ लाख ४७ हजारमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ६९ रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ४६ रहेको गोर्खाज फाइनान्सको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ९० प्रतिशत घटेको छ ।